Amabhishi amade kakhulu eYurophu naseMhlabeni | Izindaba Zokuhamba
Amabhishi amade kakhulu eYurophu
UMaria Jose Roldan | | España, EFrance, Amabhishi
Uma ungumthandi wasebhishi, akudingekile ukuthi kufanele weqe "olwandle" ukuze ukwazi ukujabulela amabhishi amahle kakhulu emhlabeni, ngoba eYurophu sinamabhishi amahle nawo made kakhulu.
Uma ngaphezu kwamabhishi uthanda ukubona ukuthi awunawo umkhawulo, lapho-ke awukwazi ukuphuthelwa amabhishi amade kakhulu eYurophu ngoba mhlawumbe uma wazi ukuthi ziyini nokuthi zikuphi ... uzoqala ukulungiselela uhambo oluya kulezi zindawo.
1 Phakathi kwamazwe amabili: iFrance nePortugal
1.1 ICosta Caparica
2 Amabhishi amade kakhulu emhlabeni
2.1 IPraia do Cassino, iRio Grande eBrazil
2.2 ICox Bazar Beach eBangladesh
2.3 Imayela Engamashumi ayisishiyagalolunye eNew Zealand
2.4 IFraser Island, iQueens, e-Australia
2.5 UPlaya del Novillero, eNayarit, eMexico
Phakathi kwamazwe amabili: iFrance nePortugal
Kunamazwe amabili ancintisana ngenhlonipho yokuba nolwandle olude kakhulu eYurophu: iFrance nePortugal. Ngeke singene ebunzimeni futhi sizozikhawulela ngokwethula labo abazongenela ukhetho, amabhishi amakhulu futhi anconywe kakhulu: ICosta da Caparica, eduze kwaseLisbon kuzoba ngeyokuqala kuthi eyesibili kube yiLas Landes, eFrance Aquitaine.
ICosta da Caparica iyindawo enesihlabathi ebanzi nenhle yase ngaphezu kwamakhilomitha angama-230 ubude eningizimu yomlomo woMfula iTagus (noma uTejo njengoba amaPutukezi akubiza kanjalo). Yindawo ethandwa kakhulu lapho abantu bendawo bethutheleka khona ehlobo ukuyoshiswa yilanga nalapho kulisiko ukuba nomkhosi odumile womculo. Yebo, abantu abaningi baya kuleli bhishi kepha ngenxa yobukhulu balo akunakwenzeka ukulibona ligcwele isigamu.
Ekupheleni oseningizimu yeCosta da Caparica kunendawo yaseLagoa de Albufeira, indawo engcwele yemvelo esesimweni sechibi lapho kuhlala khona izinhlobo eziningi zezitshalo nezilwane. Lihle ngendlela emangalisayo! Ngaphezu kokujabulela amabhishi amahle, ungabuye ucabange ngemvelo kubo bonke ubukhazikhazi bayo. Ngaphandle kokungabaza, yindawo enhle yokuchitha iholide elihle, futhi futhi sinayo eduze kakhulu neSpain! Akudingekile ukubamba izindiza kanye namahora okundiza namahora ... IPortugal yizwe lethu elingumakhelwane futhi lokhu kuyizaba zokuyivakashela.
Sithatha ukweqa ngokwezindawo bese siya ogwini lwe-Atlantic eFrance olusuka emngceleni waseSpain uye enyakatho futhi lufinyelela kumakhilomitha ayi-100. Kungu ugu olunesihlabathi lweLandes futhi lakhiwe ngochungechunge lwamabhishi athintekayo aphazanyiswa yimizana emincane yokudoba nezindawo ezinamadwala. Lapha kukhona umehluko nokuphikisana neCosta da Caparica, okuwulwandle oluqhubekayo futhi hhayi iqoqo lamabhishi axhunyiwe.
Le ndawo engasogwini ebizwa ngeCôte d'Argent (iSilver Coast) Ilungele labo abafuna indawo yokuphumula ngaphandle kwezixuku noma abafuna ukujabulela imvelo, kepha futhi nalabo abathanda imidlalo yezamanzi efana nokuntweza, ukushaywa umoya noma ikitesurfing. Indawo (noma amabhishi) ongeke ukwazi ukuyiqeda noma uyivakashele ngokuphelele.
Amabhishi amade kakhulu emhlabeni
Kungenzeka ukuthi ngemuva kokuthola lamabhishi amabili amahle futhi uthole ukuthi yiwona made kunawo wonke eYurophu, manje usufuna ukuthatha isinyathelo esisodwa futhi uthole ukuthi yimaphi amabhishi amade kunawo wonke emhlabeni. A) Yebo, Uma uhlangana nabo, ungakhetha ukuhlela olunye uhambo lokuwavakashela futhi uthandane namabhishi amaningi ngaphezu kwelide kakhulu eYurophu.
IPraia do Cassino, iRio Grande eBrazil
Akukho lutho olungaphansi ukuthi amakhilomitha angama-254 ubude, lolu lolwandle luseGuinness Book of Records njengolwandle olude kunazo zonke emhlabeni. Isuka edolobheni laseRío Grande iye kwelaseChuy emngceleni we-Uruguay. Kulu lolwandle olumangalisayo oludabula emadolobheni amaningana futhi lokho kuyisimanga kubavakashi abahlala befuna ukujabula ukubona ulwandle olude kakhulu emhlabeni. Futhi uthathe idiphu!
ICox Bazar Beach eBangladesh
Uma uhlela ukuya eBangladesh eholidini ngeke ukwazi ukuphuthelwa elinye ibhishi elithathwa njengelide kakhulu emhlabeni elingenalutho olungaphansi Amakhilomitha angama-240 esihlabathi esingaphazanyiswa. Itholakala eningizimu yeChittagong futhi inamathempeli amaBuddhist emzileni wayo.
Imayela Engamashumi ayisishiyagalolunye eNew Zealand
Uma ufuna ukuya eNew Zealand ngeke ukwazi ukuphuthelwa yibhishi elinegama lalo elikunikeza umkhondo wokuthi lide kangakanani. Ibizwa ngamaMiles ayisishiyagalolunye ngoba lobu ubude obunqamula emabhishi ayo, abengalingana nalutho olungaphansi Amakhilomitha ayi-140 olwandle, kodwa kuphela amakhilomitha angama-82 angaphazanyiswa. Inemincintiswano yesihlabathi esihle kanye nemincintiswano yokudoba nayo ebanjwayo. Ngaphezu kwalokho futhi uma lokho bekungenele ungabona amahlengethwa, imikhomo nezinye izilwane phakathi kwamanzi ayo amahle.
IFraser Island, iQueens, e-Australia
Lesi isiqhingi esikhulu kunazo zonke emhlabeni esinesihlabathi ngakho-ke kulindeleke ukuthi sibe namabhishi amade. Linganisa ngaphansi kuka-1630 km2 futhi inamabhishi angamakhilomitha ayi-120. Kuyisiqhingi esikhule kakhulu ezingeni lezivakashi sibonga amanzi aso acwebezelayo ne-gastronomy yendawo.
UPlaya del Novillero, eNayarit, eMexico
Lolu lolwandle luheha kakhulu futhi ngenxa yalo Amakhilomitha angama-82 olwandle. Inamanzi afudumele angajulile futhi yaziwa ngamathafa ayo amahle. Leli bhishi futhi liyindawo ekahle yokubuka indawo futhi ujabulele ibhishi elihle elizungezwe abantu abakhulu.
Njengoba ukwazi ukubona, kunamabhishi amaningi akhona emhlabeni amade impela nokuthi ungavakashela futhi ujabulele ngokukhululeka noma nini lapho ufuna ukuthatha uhambo lokuya endaweni yasezulwini. Kulula njengokufuna amabhishi emephini, ukuthola lowo omthanda kakhulu kunabo bonke futhi qala ukulungiselela uhambo oluphelele. Kuzofanele ubhukhe indiza noma amathikithi adingekayo, uthole ihhotela noma indawo yokuhlala eseduze ukuze kube lula ukufinyelela emabhishi futhi ukwazi ukujabulela yonke into leyo ndawo oyikhethele yona.
Yimaphi amabhishi owathanda kakhulu? Ngabe kukhona owaziyo? Uma ufuna ukwengeza ibhishi kulolu hlu noma ubeke amazwana ezintweni ocabanga ukuthi zibalulekile ukuzicabangela izihambi zesikhathi esizayo, zizwe ukhululekile ukwenza njalo! Impela ngeminikelo yakho sonke sizozicebisa futhi sizokwazi ukwazi izindawo eziningi ezinamabhishi amahle emhlabeni. Ungalindi isikhathi eside kakhulu ukuhlela iholide lakho!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » España » Amabhishi amade kakhulu eYurophu
IBora Bora, ipharadesi eliyingqayizivele eFrench Polynesia
IGulhi, ama-no-frills Maldives